Iinkqubo zeBentley zibhengeza ukufunyanwa kwe-SPIDA-Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Iinkqubo zeBentley zibhengeza ukufunyanwa kwe-SPIDA
Geospatial - GISZobunjineliezintsha
Ukufunyanwa kweSoftware yeSIDIDA
I-Bentley Systems, Incorporate (Nasdaq: BSY), inkampani yesoftware yobunjineli, ibhengeze namhlanje ukufunyanwa kwesoftware ye-SPIDA, abaphuhlisi besoftware ekhethekileyo yoyilo, uhlalutyo kunye nolawulo lweenkqubo zeepali. Yasekwa ngonyaka ka-2007 eColumbus, eOhio, i-SPIDA ibonelela ngemodeli, yokulinganisa kunye nesisombululo solawulo lwedatha kwiinkampani zombane nezonxibelelwano kunye nabanikezeli beenkonzo zobunjineli e-US nase Canada. Ukudityaniswa kwe-SPIDA ngaphakathi kwesoftware ye-Bentley's OpenUtilities yesoftware kunye neenkonzo zenethiwekhi zamawele ezidijithali ziya kunceda ukujongana nemiceli mngeni yotshintsho kwimithombo yamandla ehlaziyekayo, kubandakanya ukutshaja kwezithuthi zombane, ukusetyenziswa ngokudibeneyo kwezibonda ukuxhasa ukwandiswa kwe-5G yothungelwano lwebhendi ebanzi kunye nala maxesha. ukuqina kwigridi yamandla ukugcina ukuthembeka kunye nokomelela.
Iigridi zedijithali zinokubonelela ngezixhobo zokuntywila kunye nezobuchwephesha bokubonisa ukuhambisa kunye nokusasaza iiasethi, ukudibanisa iigridi ezifanelekileyo kunye nohlalutyo lolwakhiwo kunye ne-3D kunye ne-4D yokwenyani njengoko isebenza. Izisombululo zewele ze-Bentley's OpenUtilities zenethiwekhi zedijithali zenza ukuba abaqhubi bamandla kunye nabavelisi bavavanye iindlela kunye namathuba othungelwano, ngoku asebenzisa imithombo yesiko, ehlaziyiweyo kunye neyokugcina amandla. Njengoko zibonelela ngeenkonzo ukuhlangabezana neemfuno. Amawele edijithali akhuthaza ulawulo lwempilo yeasethi ngokuguqula i-IT, i-OT, kunye ne-ET (imodeli yobunjineli kunye nokulinganisa) yokunyusa imithombo yedatha yeziseko zophuhliso kunye nohlalutyo lokuqikelela ukuphucula ukhuseleko, ukusebenza kunye nokuthembeka. Ngokudityaniswa kwe-SPIDA, ukufikelela kwamawele edijithali enethiwekhi ngoku kunganwenwela kulwakhiwo lweepali kunye nothungelwano, ukubonelela ngendawo esengozini yokusingqongileyo "imayile yokugqibela" yeziseko zophuhliso ezibalulekileyo zamandla abalulekileyo nonxibelelwano.
Ukukhokela izixhobo zombane, kubandakanya i-Ameren, i-EPCOR, iNkonzo yeNzibane yeNashville (i-NES), kunye ne-Southern California Edison (SCE), ukuyila ukusebenza ngokukuko kunye nokomelela kweenkqubo zabo eziphezulu besebenzisa isoftware ye-SPIDA. Izisombululo zepali ze-SPIDA zibandakanya i-SPIDAcalc yokubamba, imodeli kunye nokwenza ngcono ukuhanjiswa okuphezulu kunye nokuhanjiswa kweeaseti zemithwalo yolwakhiwo. I-SPIDAsilk ukuhlalutya ukugoba kwentambo kunye noyilo lobunzima beepropathi zomzimba kunye nokusingqongileyo kufakelo oluchanekileyo lokuqhuba kunye nokuqina kwentambo; kunye ne-SPIDAstudio, iqonga elisekwe kwilifu elilandelela kwaye lilawule imeko yeasethi kunye nemeko ebonakalayo yeenkqubo zomoya.
Njengoko ulwandiso olukhawulezayo lwemithombo yamandla ehlaziyekayo luqhubeka kwaye kukho imfuno eyandayo yokusetyenziswa kwezithuthi zombane, iziseko zophuhliso zenethiwekhi yethu iyagcwala kakhulu, kunye nokusasazwa kwe-5G enikwe amandla i-Broadband, iipali zoncedo Ababukeli benethiwekhi baxabiseke kakhulu kwiziseko zophuhliso ezizinzileyo, "utshilo u-Alan Kiraly, usekela-mongameli omkhulu, intsebenzo yenethiwekhi kunye neeasethi, iiNkqubo zeBentley.
Ukufunyanwa kwesoftware ye-SPIDA, ngelixa kungabalulekanga kwiziphumo zezezimali zeBentley, kuyakongeza oogxa abangama-26 eMntla Melika. Abacebisi beemayile ze-7 bacebise abaphathi be-SPIDA kunye nabanini zabelo kwintengiselwano.
Umbono wethu nge-SPIDA ubusoloko ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo nesivulekileyo sokugcina nokuphucula impilo kunye nokuthembeka kwamandla abasebenzisi bethu kunye nempahla yeziseko zonxibelelwano. Ngaphakathi kweqela leBentley, sijonge phambili ekukhawuleziseni izisombululo zamawele egridi yedijithali, ephakamisa ubuchwephesha besizinda soshishino lwethu kwaye ibandakanye uhlalutyo lwesakhiwo se-SPIDA. Abasebenzisi bangoku kunye nabexesha elizayo be-SPIDA banokujonga phambili ngokuzithemba ekuxhaseni amawele edijithali njengoko bephucula, beguqula, bekhulisa kwaye belawula iinkqubo zabo zokuhamba emoyeni. " Brett Willitt, uMongameli we SPIDA Software
Ingaba ithetha ntoni?
Ndiyabulela koku kufunyanwa kutsha kweeNkqubo zeBentley ukuphucula ukusebenza kunye nokuchasana kwenethiwekhi, iyahambelana neenkonzo zefu ze (DT) iwele ledijithali -Vula iiNkonzo- ezibonelelwe yile ngxilimbela yezobuchwephesha. Oku kudityaniswa kwezimvo kunye nokusetyenzwa kweenkqubo kuvumela ukujongana nemiceli mngeni emitsha enxulumene namandla acocekileyo / ahlaziyekayo, kunye nokuphucula uhlalutyo lolwakhiwo lwezixhobo ezinxulumene neenkonzo zoluntu.
I-Bentley iya ngokuya ixhomekeke kubuchwephesha kuphuhliso lwendawo olubanzi noluzinzileyo. Ukubaluleka kokwenza inkqubela phambili yolu hlobo kukuba nesiseko esifanelekileyo sokuhambisa kunye nonxibelelwano oluchanekileyo kuzo zombini iinkonzo ze-5G kunye nokomelezwa kothungelwano lombane kunye nokuqina kwazo ekuhambeni kwexesha. Izigqibo ezifanelekileyo zeBentley System zibonisiwe kukunyuka kwamaxabiso ezabelo ukusukela kunyaka ophelileyo. Okubonisa ukuba iya kuqhubeka nokukhula kwaye ihlala iguquka, isombulula izisombululo zayo kubunyani bale nguqulelo kwezine zorhwebo.
Siyavuya kakhulu ukwamkela oogxa bethu abatsha be-SPIDA kwiiNkqubo ze-Bentley kunye ne-OpenUtilities, kwaye sijonge phambili ekudibaniseni kunye nokudibanisa i-software ye-SPIDA yehlabathi, esele eyaziwa njenge-stalwart ethembekileyo yeenjineli zokusasaza amandla kumsebenzi wabo obalulekileyo wokuphucula ukusebenza kwenethiwekhi kunye nokomelela. U-Ian Kiraly, iSekela likaMongameli oPhezulu, iNethiwekhi kunye neNtsebenzo ye-Asethi, iBentley Systems.
Iinkqubo zeBentley (Nasdaq: BSY) yinkampani yesoftware yobunjineli. Sinikezela ngesoftware yokuqhubela phambili iziseko zehlabathi, ukugcina uqoqosho lwehlabathi kunye nokusingqongileyo. Isisombululo sesoftware esikhokela kwimizi-mveliso sisetyenziswa ziingcali nemibutho yabo bonke ubungakanani kuyilo, ulwakhiwo kunye nokusebenza kweendlela kunye neebhulorho, oololiwe nokuhamba, amanzi namanzi amdaka, imisebenzi yoluntu kunye nezixhobo, izakhiwo kunye neekhampasi. Iminikelo yethu ibandakanya usetyenziso olusekwe kwiMicroStation yokwenza imodeli kunye nokulinganisa, iProjekthiWise yokuhanjiswa kweprojekthi, iAssetWise yenethiwekhi kunye nokusebenza kwempahla, kunye neqonga le-iTwin lamawele edijithali eziseko. Inkqubo yeBentley iqeshe ngaphezulu kwama-4000 oogxa kwaye ivelise ingeniso engaphezulu kwe- $ 800 yezigidi kumazwe ayi-172. www.bentley.com